Raw SA 47 (792236-07-8) mpamatsy hplc≥98% | AASraw
Ho an'ny pejy vitsivitsy dia voadika amin'ny rindrankajy ary tsy ampy tsara izy ireo, azafady mba hanamarina ny anglisy fahitana ho an'ny antsipirihany kokoa.
/Products /Vokatry ny vinaingitra/ SA 47
Rating: Sokajy: Vokatry ny vinaingitra Tags: Buy SA 47, SA 47, SA 47 for sale, SA 47 mpamatsy
SA 47 dia fisintahana FAAH mifantoka amin'ny fampiasana amin'ny fahavoazana. AASraw dia manome ny fahadiovana tsy latsaky ny 99% SA 47 dia ampiasaina amin'ny bodybuilders na laboratoara ambanin'ny tany ho an'ny fahavoazana mavesatra. Isika no mpamatsy SA 47, SA 47 mivarotra, ..
I.SA 47 ireo karazana fototra:
Meny fitetezana 334.41
Solubility DMSO mankany 100 mM 1eq. HCl amin'ny 50 mM ethanol mankany 50 mM
II. SA 47 ampiasaina amin'ny famokarana:
SA 47 vovoka
2.SA fampiasana 47:
Ho an'ny dosie 88 mg / kg ho an'ny medikaly iray, ny fomba fampiharana doka ho an'ny raty dia: multiply 88 mg / kg amin'ny kofehy KM (3) ary mizara amin'ny kofehy kantsa Km (6) Misy tahan'ny mitovy amin'ny 44 mg / Kilasy ho an'ny voalavo.
3.Jereo amin'ny SA 47
IV. Ahoana no hividianana SA 47 avy any AASraw?
Female Viagra? Ny zava-drehetra momba ny volo mampihetsiketsika ny Flibanserin Ahoana ny fampiasana Clenbuterol ho an'ny fatiantoka Inona no nandrodana ny vovoka nampiasaina / nandrolone tombontsoa?
Isaky ny 8 ora izahay dia mahazatra.
Manavotra maimaim-poana sy ho an'ny firenena sasany, manome antoka anao hahazo ny entana ianao.
Raha mila fangatahana dia mifandraisa azafady mailaka , Manao valin-kafatra izahay amin'ny ora 8.
Tadiavo 1 avy amin'ny 5 Tadiavo 2 avy amin'ny 5 Tadiavo 3 avy amin'ny 5 Tadiavo 4 avy amin'ny 5 Tadiavo 5 avy amin'ny 5
Aoka ianao hojerena aloha ny "SA 47" hanafoana ny valin-
Hormonal Enhancing Sex (13)
Ny hafa (12)
Ahoana ny fampiasana mivantana ny vatana?
Mividiana ny fahadiovana moka Tadalafil anaty aterineto: Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao !!!
Tykerb (231277-92-2) -Nanararaotra ny mpitaingin-tsoroka
Ny fanazavana farany amin'ny fanemorana JZL-184 (1101854-58-3) mpamatsy
WWL70 fitsaboana fanafody manimba ny PGE2 sy PGE2-G
IDFP (615250-02-7): Effects, Dosage, Reviews
Levonorgestrel: Ny fomba fiasa, ampiasaina, ny vokatra hafa
Dr. Patrick Young on Aiza no hividianana vovoka Dianabol madio?
J Burks on Aiza no hividianana vovoka Dianabol madio?
Dr. Patrick Young on Aiza no hividianana vovobony ao anaty aterineto?
Vagelis on Stanozolol ho an'ny fanabeazana bodybuilding: zava-misy 16 tokony ho fantatrao !!!